Nhau - Taura nezve PP yakanyungudika yakaputirwa jira jira
Taura nezve PP yakanyungudika yakaridzwa jira jira
Inonyungudika jira (yakanyungudika yakaputirwa isina-yakarukwa machira) chigadzirwa chakagadzirwa nepamusoro-kusungunuka index PP (polypropylene) rinoumbwa risina-rakarukwa jira. Ndiwo musimboti wezvinhu zvemask. Iyo dhayamita ye spinneret fiber inogona kusvika 0.001 kusvika 0.005 mm. Kune akawanda mavhaid, fluffy chimiro, yakanaka kuunyana kuramba, uye yakasarudzika capillary chimiro Ultrafine tambo inowedzera huwandu uye nzvimbo yepamusoro yefibha pane imwe unit nzvimbo, kuitira kuti iyo yakanyungudika jira ine yakanaka firita, inodzivirira, kupisa kupisa uye mafuta kunwa. . Mashandisiro ayo makuru anosanganisira kusefa kwemhepo, acid-kutyora mvura kusefa, kusefa kwehutsi, maindasitiri eguruva-chiratidzo mask kugadzirwa, nezvimwewo. Pamusoro pezvo, inogona zvakare kushandiswa sezvekurapa uye zvehutsanana zvigadzirwa, maindasitiri akanyatso pukuta, anopisa ekuputira zvinhu, mafuta- inotora zvinhu, mabhatiri akaparadzanisa, uye ekuteedzera machira eganda. uye zvimwe zvakawanda. Kubva pakatanga kuputika kwepasirese kwedenda idzva rekorona, State-owned Assets Supervision and Administration Commission yeState Council yakakumbira makambani akakodzera kuti akurumidze kuvakwa kwemitsetse yekugadzira, kuisa mukugadzira nekukurumidza sezvinobvira, uye kuwedzeredza kugoverwa kwemeltblown nonwovens mumusika kupa dziviriro yekudzivirira uye kudzora denda.
Kwakajairika nzvimbo dzekushandisa dzemachira akanyungudika asina-dzakarukwa:
1. Kunyorera mumunda wekuchenesa mweya: unoshandiswa mukuchenesa mweya, seyakanyanya-inoshanda mhepo firita chinhu, uye inoshandiswa kune yakasviba uye yepakati-inoshanda mweya kusefa ine yakakura kuyerera mareti. Iine zvakanakira yakaderera kuramba, yakasimba simba, yakanakisa acid uye alkali kuramba, ngura kuramba, kugadzikana kushanda, hupenyu hurefu hwebasa, uye mutengo wakaderera.
3. Liquid firita yezvinhu uye bhatiri diaphragm: Polypropylene yakanyunguduka jira rakaputirwa rinoshandiswa kusefa acidic uye alkaline zvinwiwa, oiri, nezvimwewo ine kuita kwakanaka kwazvo, yakaonekwa seyakanaka diaphragm zvinhu nebhatiri indasitiri kumba nekune dzimwe nyika, uye yave ichishandiswa zvakanyanya, Kwete chete inoderedza mutengo webhatiri, inorerutsa maitiro, uye inoderedza zvakanyanya huremo uye huwandu hwebhatiri.
4. Zvinhu zvinopinza oiri uye zvinopukuta zvemaindasitiri: zvinhu zvakasiyana-siyana zvinokanganisa oiri zvakagadzirwa nemachira epolypropylene yakanyunguduka, iyo inogona kutora mafuta kusvika ka14-15 zvakapetwa nehuremu hwayo, anoshandiswa zvakanyanya muzvirongwa zvekuchengetedza nharaunda uye mapurojekiti emafuta-emvura ekuparadzanisa. Uye zvakare, ivo vanoshandiswa mukugadzirwa kwemaindasitiri. , Inogona kushandiswa sechinhu chakachena chemafuta uye guruva. Aya maficha anopa kutamba kuzere kune hunhu hwe polypropylene pachayo uye kushambadzira kweiyo ultrafine tambo inogadzirwa nemeltblown.
5. Thermal kuputira zvinhu: Iyo yepakati dhayamita yemeltblown fibers iri pakati pe0-5-5μm, uye ivo vanogadzirwa zvakananga kuva machira asina-kurukwa kuburikidza nekuisa zvisina kurongeka. Naizvozvo, iyo chaiyo nzvimbo yenzvimbo yekunyungudika faibha yakakura uye porosity yakakwira. Mhepo yakawanda inochengetwa muchimiro ichi. , Inogona kunyatso kudzivirira kupisa kurasikirwa, inoyevedza kusefa uye kuputira zvinhu. Inoshandiswa zvakanyanya mukugadzirwa kwembatya uye dzakasiyana siyana kudziya kwekushisa zvinhu. Zvakadai sejaketi dzematehwe, hembe dzeski, mbatya dzinotonhora, machira ekotoni, nezvimwewo, zvine zvazvakanakira uremu hushoma, kudziya, kusapinza hunyoro, kugona kwemhepo kwakanaka, uye hapana chakuvhe.